ရေပိုက် crimping စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု - တရုတ် Weifang အား Haidatong Machinery
ရေပိုက် crimping စက်
CNC crimping စက်
ရေပိုက်ရှုး & skiver
ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် & fittings
ရေပိုက် crimping စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ရေပိုက် crimping စက်အတော်လေးစျေးကြီးသည်။ ၎င်း၏အပိုင်းအစမြန်နှုန်းနှေးကွေးအသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်မှန်မှန်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုသင့်ရဲ့ကိုးကားနေသောခေါင်းစဉ်:
1. အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့: ထိုကဲ့သို့သောသံချေး, ချေးနှင့်ပုံပျက်သောအဖြစ်မည်သည့်မူမမှန်ရှိပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးရန်ရေပိုက် crimping machine ပေါ်တွင်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်ပညာရှင်များကိုမေးပါ။ ဒါကြောင့်ပါလျှင်, အချိန်၌ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါ။
2, သန့်ရှင်းရေး: ရေပိုက် crimping စက်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားခြင်း, စင်ကြယ်ခြောက်သွေ့သောအထည်ဖြင့်စင်ကြယ်ကသုတ်ကိုအထူးသန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်ကိုသုံးပါ။
3, oiling: ရေပိုက် crimping စက်၏မျက်နှာပြင်အပေါ်ဆန့်ကျင်သံချေးရေနံလျှောက်ထားနှင့်ချောမွေ့စွာလည်ပတ်စေရန်၎င်း၏ပြေးအစိတ်အပိုင်းများရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာချောဆီ။
Post ကိုအချိန်: ဧပြီ-28-2019
Diandong ကျေးရွာ, Beicheng Subdistrict, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်, Weifang အား 261057 ရှန်ဒေါင်း, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-13793601600
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-13793601173
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-536-8300060
E-mail ကို: no2@cncrimping.com
ဖက်စ်: + 86-536-8300060
ရေပိုက် crimping စက်အတော်လေးစျေးကြီးသည်။ ၎င်း၏အပိုင်းအစမြန်နှုန်းနှေးကွေးအသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်မှန်မှန်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုသင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းသည်: 1. အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့: professi မေးဖို့ ...